မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်
ဒါကလူအများကြီးကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေတယ်။ အဖြေသည်တီဗွီပေါ်တွင်မူတည်ပြီးမီးလုံးများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ USB port ပိတ်ထားလျှင်မီးများပါဝါဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
တီဗီများစွာအတွက်ဤအရာသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်တစ် ဦး ပိုင်ဆိုင်လျှင် Sony Bravia TV၊ သင်သည် MediaLight အဝေးထိန်းခလုတ်ကဲ့သို့သောဖြေရှင်းနည်းကိုသုံးရန်လိုလိမ့်မည် Bravia ၏ USB port များ (MediaLight Mk2 Flex နှင့်ပါ ၀ င်သည်) ပါ ၀ င်သည် မှားယွင်းစွာပြုမူပါ။ မင်းမှာသီးခြားတီဗီတစ်လုံးပါတဲ့ဆမ်ဆောင်းတီဗီတစ်လုံးရှိရင် USB ပေါက်လည်းမပိတ်ဘူး၊ ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့တီဗီအသစ်တွေလည်းအခါအားလျော်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ Samsung နှင့် LG ကဲ့သို့သောတီဗီအချို့သည်တီဗီကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်မီးများပိတ်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။ ၎င်းသည် panel ၏သက်တမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်တီဗွီပိတ်ထားတဲ့အခါမင်းရဲ့ TV ကပါဝါကိုပိတ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ MediaLight ပေါ့ လိမ့်မည် ပါဝါဆုံးရှုံးလျှင်ပိတ်ပစ်ပါ။
ဤ blog post တီဗီအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အခြေခံ၍ မျှော်လင့်ရမည့်အရာများကို သင့်လျော်သောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်။
ဟုတ်သည်။ dimmer တစ်ခုစီတိုင်း ငါတို့ရောင်းသောတည်မြဲသောမှတ်ဉာဏ်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပါဝါများကိုမီးများသို့ပြန်ယူသောအခါအလင်းသည်ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့်တောက်ပမှုအဆင့်သို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
မင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ဖို့ IR blaster နဲ့မင်း universal remote remote (သို့) smart hub ကို remote control command တွေသင်ပေးနိုင်တယ်၊ မင်း Alexa (သို့) Google Home ကိုမီးဖွင့်ပေးဖို့မင်း Alexa (သို့) Google Home ကိုပြောဖို့ (မင်း HomeKit ကိုသုံးနိုင်တယ်) HomeBridge ကိုသုံးရန်လိုအပ်သည်။ )
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာတိကျမှန်ကန်စွာထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းအရည်အသွေးဗီဒီယိုဖြူဘက်လိုက်မှု အလင်းရောင်, စားပွဲတင်မီးအိမ်, လ်တာနှင့်မီးသီး. အခြားအရာအားလုံးသည် စကားလုံး၏မှန်ကန်သောအဓိပ္ပာယ်တွင် ဘက်လိုက်သည့်အလင်းမဟုတ်သော LED အကွက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ သင့်တီဗီပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ သင့်နံရံပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ သင့်တီဗီတွင် တိကျသောအရောင်များကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သောကြောင့် အရောင်ပြောင်းလဲသည့်ထုတ်ကုန်များကို ကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်ပါ။ ခကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းများသည်သင်၏နေရာကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တီထွင်ထားသော D65 အဖြူရောင်ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်သည်သင်၏တီဗီအတွက်အကောင်းဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်သင်အားကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်။
အကယ်လို့မင်းရဲ့ display ကိုချိန်ညှိဖို့အချိန်နဲ့ပိုက်ဆံကုန်မယ်ဆိုရင်ဘက်လိုက်မှုကပြောင်းလဲသွားတာကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ် အရောင်များသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအဖြူရောင်အမှတ်ကိုအသုံးပြု။ လိမ့်မယ် "ချိန်ညှိခြင်း"သင်၏လေ့လာသူရဲ့ရှုထောင့်ကနေသင့်ရဲ့ display ကို။
သင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရောင်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အရည်အသွေးများကိုတိုးတက်စေသည့်ဘက်လိုက်အလင်းအိမ်များဖြင့်သင်၏ display ကိုတိုးမြှင့်လိုပါက၊ မျက်လုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချပြီးရုပ်ပုံများကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းကိုတားဆီးနေလျှင်သင်နေရာမှန်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ MediaLight သည်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ပညာရှင်များနှင့်စားသုံးသူများ၏တိကျမှု၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်မြင့်တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးသည် သက်တမ်းပိုရှည်စေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအယ်လ်အီးဒီများ၏ သက်တမ်းမှာ ၁ နှစ်အောက်ရှိသည့်အခါ၊ MediaLight အကွက်တစ်ခုစီသည် 1 နှစ်အာမခံပေးထားပြီး "တစ်ခုဝယ်၊ တစ်ကြိမ်ငိုပါ" ဟူသော စကားဟောင်းကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။
မင်းရဲ့မီးလုံးတွေကို Amazon မှာရောင်းသလား။
နိုင်ငံတကာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အချို့သည်နိုင်ငံတကာ Amazon ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ရောင်းချနိုင်သော်လည်း Amazon.com တွင် MediaLight သို့မဟုတ် LX1 ကိုကျွန်ုပ်တို့မရောင်းပါ။ ငါတို့ကငါတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းတာနဲ့ငါတို့ရဲ့စာရင်းနဲ့စာရင်းတွေကိုထိန်းချုပ်တာပိုကြိုက်တယ်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင် Amazon Pay ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို Amazon တွင်မရောင်းပါ။
ဟုတ်တယ်။ သူတို့ကပုံအရည်အသွေးမတိုးတက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုလုပ်ရမယ့်အခက်အခဲကိုကျော်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ အရည်အသွေးနိမ့်သောအလင်းရောင်အောက်ရှိအသားအရေအရောင်များကိုကြည့်ပြီး CRI 98 MediaLight ဘက်လိုက်မီးသို့မဟုတ်မီးသီးအောက်တွင်တစ်ဖန်ပြန်ကြည့်ပါ။ အရေပြားအရောင်မှရောင်ပြန်ဟပ်သောအခါအနီရောင်ရောင်ခြည်မရှိသောအလင်းအရင်းအမြစ်များသည်ကြည့်။ မမှန်ပါ။ display calibration ၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာအသားအရေအရောင်များကိုသဘာဝအတိုင်းဖြစ်စေရန်အာမခံသည်။
transmissive display (ဆိုလိုသည်မှာ TV) တစ်ခုနှင့်အတူအလင်းသည်ပြသမှုမှရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိသော်လည်းကြည့်ရှုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အလင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြန် ကျနော်တို့ display ကိုအပေါ်မြင်သောအရာကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
နွေးထွေးသောအလင်းရောင်ကြောင့်တီဗွီကိုအပြာကြည့်ရသည့်အကြောင်းအရင်းသို့မဟုတ်အနီရောင်များလွန်းသောမီးများသည်အဘယ်ကြောင့်ရုပ်ပုံကိုအစိမ်းရောင်ဖြစ်စေသည်နှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော် chromaticity ကိုသြဒီနိတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲရောင်စဉ်တန်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုသည်အလင်းအရင်းအမြစ်၏ရောင်စဉ်တန်းပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရှုပ်ထွေး? iPhone နှင့် Android ဖုန်းများတွင်ယခုချိန်ညှိချက်များရှိသည့်အခန်း၏အဖြူရောင်နေရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စဉ်းစားပါ။ အကယ်၍ TrueTone (သို့) "adaptive display" ကိုဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ပါက display ၏အဖြူပွိုင့်သည်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်အလင်းသည်သင့်မျက်နှာပြင်အပေါ်သင်၏အမြင်ကိုမည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးမပြုပါကအလင်းပေါ် မူတည်၍ မြင်ကွင်းသည်နွေးလွန်း။ အေးသွားနိုင်သည်။
အနိမ့်အရောင် rendering အလင်းရောင် (အနိမ့် CRI အဖြစ်ယေဘူယျ) တွင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရောင်များရှိနေသောကြောင့်, ရောင်စဉ်တန်းချို့တဲ့ကျနော်တို့ display ကိုအပေါ်သူတို့အားတူညီသောအရောင်များကိုရိပ်မိပုံကို impact နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ retinas ရှိအရောင်အာရုံခံကိရိယာများသည်အခြားမူလတန်းများထက်အနီရောင်ကိုမြင်ရန်ရည်စူးပြီးအနီရောင်၊ အစိမ်းနှင့်အပြာ subpixel များပါဝင်သည်။
ထို့အပြင်အနီရောင်မရှိသောအလင်းအရင်းအမြစ်များသည်၎င်းတို့၏အဖြူရောင်အမှတ် (အဝါရောင် + အပြာ = အနိမ့် CRI အဖြူ) အောင်မြင်ရန်အဝါရောင်အလင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ယင်းကိုအစားထိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဝါရောင် / အစိမ်းရောင်အလင်းကိုအကင်းပါးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရောင်အားနည်းသောထိုမီးများသည်နေရောင်ခြည်နှင့်မတူဘဲအဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အဘယ်ကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ရကြောင်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှင်းပြသည်။
မဟုတ်ပါ၊ အနီအောက်ရောင်ခြည် LED ကိုအဝေးထိန်းခလုတ်မှမမြင်နိုင်ပါ အနီအောက်ရောင်ခြည်။ အဝေးထိန်းသည်မြင်သာစွာမလင်းပါ။ MediaLight သည်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအဝေးထိန်းကိုမသုံးပါ။ ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်လိုက်ရင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏မူလဝေးလံသောနေရာများသည် RF နှင့်သိသာထင်ရှားသည့်အလင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကျော်က RF RF Remote များကိုတင်ပို့ခဲ့သည်။
သင်၏အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအလုပ်မလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၉၉% သေချာသည် ဤအပြုပြင်မှုများထဲကတစ်ခု သင်၏ပြsolveနာကိုဖြေရှင်းလိမ့်မယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကအာမခံပြောဆိုချက်ကိုငြင်းပယ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။
သို့သော်တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းသွားပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သည်ကိုသင့်အားသတိပေးရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ရှုမြင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်လျှင်အရည်အသွေးမြင့်သော ISF အသိအမှတ်ပြုအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကုန်သွားမည်။ သို့သော်စျေးကွက်တွင်တိကျမှန်ကန်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုရရန်အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့သည်။
တစ်ခုတည်းသောအသိပေးချက် ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှကျွန်ုပ်တို့ဒေသတွင်းဖြန့်ချိသောဒေသတစ်ခုတွင်အမိန့်ပေးလျှင်၊ အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စံ USPS ပထမတန်းစားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထုပ်စာမေးလ်များထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာငွေပေးချေရန်သင့်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။
(MediaLight စားပွဲခုံများနှင့်မီးသီးများသည် ၃ နှစ် / ၃၀၀၀၀ နာရီအာမခံပါသည်။ )
MediaLight Mk5 Flex သို့မဟုတ် Eclipse အတွက် ၅ နှစ်အာမခံကိုမလိုချင်ပါကကျွန်ုပ်လျော့နည်းပေးချေနိုင်ပါသလား။
လူတို့သည်ဤမေးခွန်းကိုအခါအားလျော်စွာမေးကြသည်။ အာမခံအတွက်မပိုပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အနည်းဆုံး ၅ နှစ်သက်တမ်းကြာရှည်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၅ နှစ်အာမခံပါသည်။ အကယ်၍ အာမခံမရှိရင်ထုတ်ကုန်အတွက်အခကြေးငွေထပ်တူကောက်ခံမှာပါ။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းပုံစံကြောင့်ကြာရှည်ခံနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ငါးနှစ်ထပ်တိုးရန်မလိုပါ။
ဟုတ်တယ်၊ သူတို့လုပ်တာ။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောအဝေးထိန်းတိုင်းသည်ယုတ်ညံ့သောထုတ်ကုန်များနှင့်မတူပါ။
MediaLight သည် Amazon နှင့် Alibaba ရှိစျေးပေါသောမီးအချို့ထက်အဘယ်ကြောင့်ကုန်ကျသနည်း။
သင်ခန့်မှန်းချက်မပါ ၀ င်သောဘက်လိုက်မှုအလင်းကိုသင်ရှာဖွေလျှင်နောက်ထပ်မကြည့်ပါနှင့်။ MediaLight သည်သုံးစွဲသူအားအချိန်တိုင်းမပျက်မကွက်ဘဲတိကျမှန်ကန်သောအလင်းရောင်ပေးနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်-အာမခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများသည်မသက်သာသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံချက်သည်သင်၏ MediaLIght ကိုထိုအမှိုက်ပုံများထဲတွင်ကုန်ဆုံးစေပြီးမှကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံချက်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ ၅ နှစ်အထိအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ (သို့) နောက်ထပ်ဘက်လိုက်မီး (၅ နှစ်အထိ) ထပ်မံ ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ColorGrade SMD ချစ်ပ်များကို chromaticity နှင့် color rendering အတွက်တိကျမှန်ကန်စေရန်အသုံးပြုသည်။ သူများသည်အခြားအလင်းအိမ်မကျင့်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်သင်၏မြေအောက်ခန်းလှေကားအားစခန်းချခြင်းသို့မဟုတ်အလင်းပေးခြင်းအတွက်မကောင်းသောအလင်းတန်းများဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းတို့သည်သင်၏ချိန်ညှိထားသောမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်ရှိဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်နှင့်မသင့်တော်ဟုဆိုလိုသည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် MediaLight အတွက်အနီရောင်အညွှန်းကိန်း (CRI) မှာ Ra 2020 Ra ဖြစ်ပြီး TLCI သည် ၉၉ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမနှစ် (၂၀၁၅) တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မီးများသည် ၉၁ Ra ကျော်သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MediaLight Pro တွင်အလွန်ခိုင်မာသော CRI 98 Ra နှင့် TLCI ၁၀၀ ရှိသည်။
အဲဒါဘယ်လောက်တိကျသလဲ။ အချို့က၎င်းကိုနေမှ ခွဲခြား၍ မရနိုင်ဟုပြောလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမပြောနိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် spectrophotometer ဖြင့်လူသားလုပ်သောအလင်းအရင်းအမြစ်ကိုနေနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ခြွင်းချက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ပ်များ၏အရည်အသွေးအပြင်၊ အကောင်းဆုံးသောဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်တပ်ဆင်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးပါဝင်သည်။ သင်၏တပ်ဆင်မှုကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းရန် dimmer၊ remote TV (တီဗီမော်ဒယ်များ) အပြင်ဝါယာကြိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကလစ်များနှင့် velcro ကြိုးများပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ markups တွေကတော့ယုတ်ညံ့တဲ့ချစ်ပ်များ၊ စျေးပေါတဲ့ PCB များနှင့် dimmers ကဲ့သို့လုံးဝလိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်များမပါဘဲထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များထက်ပိုမိုကျိုးနွံပါတယ်။ သင်၏အရည်အသွေးနိမ့်သောမီးအိမ်များသည်အမှိုက်မြေသို့ရောက်ပြီးနောက်သင်သည်သင်၏ MediaLight ကိုအနာဂတ်တွင်ကောင်းစွာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ပတ်ပတ်လည်ကိုမေးပါ။ မင်းမြင်လိမ့်မယ် MediaLight ကိုတင့်ကားကဲ့သို့တည်ဆောက်ထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အာမခံချက်အောက်တွင်ရှိသည်။
ချိန်ညှိထားသော display ကိုကြည့်ချင်ပါသလား။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက၊ သင်တိကျစွာ MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းအိမ်များမှခြားနားချက်ကိုသင်လုံးလုံးမြင်လိမ့်မည်။ မမြင်နိုင်သလောက်မတိကျသောအလင်းများကိုချိန်ညှိထားသော display တစ်ခုနောက်ကွယ်တွင်ထားခြင်းသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအရာကိုအပေါ်နုတ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောကြောင့် display ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် TV ၏နောက်၌အပြာရောင်၊ အနိမ့် CRI မီးလုံးများကိုထားရှိပါကသင်၏ပုံသည်သင်၏မျက်လုံးများကိုပိုမိုနွေးထွေးစေလိမ့်မည်။
နံရံကိုရောင်စုံဖြစ်အောင်လုပ်ချင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပုံပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်နံရံများကိုမကြည့်ပါ။ သူတို့ကအများကြီးမဟုတ်ဘဲမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကငြင်းခုံဖို့ကဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဝယ်ချင်တာကိုဝယ်ပါ။ Light bleed သည်လူအများစုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားသောအရာဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးကိစ္စရပ်များအရရုပ်ပုံသည်ရုပ်ဝတ္ထုကိုကြည့်။ ကြည်လင်စေပြီးအရောင်များသည်တီဗွီနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပိုဆိုးတာကတော့ဒီဟာကနောက်ကျနေပြီ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော OCD အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏လတ်တလောဝယ်ယူသူအမျိုးအစား ၁) သင်ကငှက်ပျောသီးကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။ အမှားရှာဖို့အများကြီးရှိတယ် ဒါဟာအာရုံပျံ့လွင့်စေတယ်
သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ထိုငွေမျိုးကိုရောင်စုံမီးရောင်များ၌သုံးစွဲမည်ဆိုပါကသင်သည်ခေါင်တံခွန်ကို ပိုမို၍ ရနိုင်ပြီးပိုမိုကြီးမားသော display ကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်အလားတူနံရံနေရာအကျယ်အဝန်းကိုဖုံးလွှမ်းသွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ငြင်းခုန်လိမ့်မည်။ 65 "-90" display နှင့်အတူပုံအလွန်စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသည်။ Philips သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Ambilight ကိုစတင်ချိန်တွင်တီဗွီများသည် ၄၀ မှ ၅၀ အထိမြင့်တက်လာသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောနံရံအချို့ရှိသေးသည်။ ၎င်းသည်ဆင်ခြေမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင့်တွင် ၁၄ ပေအကျယ်မရှိပါကအရောင်မီးများသည် ၈၅ လက်မတီဗွီတွင်ကြည့်နေသည်။
မင်းရဲ့အလင်းရောင်ကအရောင်တွေပြောင်းလဲသလား။ အဖြူရောင်နွေးလား အဖြူရောင်အေးနေလား
လူတိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်များရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သိပ္ပံနှင့်စံနှုန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မီးလုံးများကိုအသိအမှတ်ပြုပါသည် ပုံရိပ်သိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း။ MediaLight တိုင်း။ ဒေါ်လာ ၃၂.၉၅ Mk32.95 Eclipse မှသည်ကျွန်ုပ်၏စျေးအကြီးဆုံးယူနစ်အထိ ISF အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
အကယ်၍ သင်သည်မက်ဆေ့ခ်ျဖိုရမ်များကိုကြည့်ပါကသင်၏မျက်လုံးများသည်မှေးမှိန်သွားသည့်အထိအေးမြသောအဖြူရောင်၊ နွေးထွေးသောအဖြူရောင်နှင့်သက်တံ့ရောင်အရောင်ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်အကြောင်းဖတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့လုပ်သင့်တာကိုလုပ်ခဲ့ရင်၊ ငါတို့ရဲ့မီးတွေအတွက်ပိုပြီးအားသွင်းစရာနယ်ပယ်တစ်ခုကိုမထုတ်နိုင်ဘူး။တကယ်တော့: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဟာသူတို့ရဲ့ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည် လက်လီ စျေးနှုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းအများကြီးနိမ့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင် MediaLight ကိုသင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံကိုဂရုစိုက်ပြီးချိန်ညှိထားသော display ၏တန်ဖိုးကိုသိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အတွက် MediaLight ကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသော CRI (98-99 Ra) CIE Standard Illuminant D65 (6500K; x = 0.3127, y = 0.329) လိုက်ဖက်သော ("ရည်ညွှန်းစံ" ဗွီဒီယိုအဖြူ) ဘက်လိုက်မှုပညာရှင်များနှင့်စားသုံးသူစျေးကွက်အတွက်၎င်းတို့ကိုရောင်းချသည်။ အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်5နှစ်အာမခံနှင့်အတူ။
ရည်ညွှန်းဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်သည်ဒါရိုက်တာရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းပုံကိုပုံဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သူများထက်တယူသန်ဆန်မှုနည်းပါးသည်။ သင့်နံရံတွင်ရောင်စုံမီးရောင်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းတို့မှသင့်အားစကားပြောရန်မကြိုးစားပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အရသာများအတွက်စာရင်းကိုင်လည်းမရှိ။
သို့သော်၊ display ကိုနောက်ကွယ်မှအရောင်တင်ခြင်းသည် display ပေါ်တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိနှင့် ဦး နှောက်များအလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှလိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်ကဲ့သို့ပူနွေးသောအရောင်သည်မျက်နှာပြင်ရှိအရာအားလုံးကိုပိုမိုတောက်ပစေလိမ့်မည်။ အပြာကဲ့သို့အေးသောအရောင်အပူချိန်ကအရာအားလုံးကိုပိုမိုအနီရောင်ဖြစ်စေသည်။ စောင့်ကြည့်တဲ့အခါဒီဟာမဆိုးပါဘူး အဆိုပါ Bachelorette, ဒါပေမယ့်သင်ကသင်၏အရောင် suite ကိုသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်နေစဉ်မှာအဲဒီလိုလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း။
MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင် D65 သည်အတိအကျလား။
MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်စနစ်က အလွန် တိကျ D65 ခြင်း simulation ။ "ပြီးပြည့်စုံသော" သို့မဟုတ် "အကြွင်းမဲ့" D65 ပါ ၀ င်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာသာစကားကိုသင်ဖတ်သောအခါဤအရာသည်လက်ရှိ LED နည်းပညာဖြင့်မဖြစ်နိုင်ပါဟုနားလည်ပါ။
အဘယ်သူမျှမအမှန်တကယ် D65 အလင်းအရင်းအမြစ်များကိုသာ Simulator မြားရှိပါတယ်။ တစ် ဦး Simulator ၏အရည်အသွေး CIE Metamerism အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းများရှိရောင်စဉ်အပြည့်အစုံ၊ အလွန်မြင့်မားသော CRI ColorGrade ™ LEDs များသည်လက်ရှိရရှိနိုင်သောအရာများ၏အကောင်းဆုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ပစ္စည်းများကို“ ပြီးပြည့်စုံသော” (သို့)“ အတိအကျ D65” ဟုခေါ်သောကုမ္ပဏီများသည် ပို၍ အားသွင်းရန်နှင့်ဤအလေ့အကျင့်တွင်မပါ ၀ င်ခြင်းကို ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပုံဖော်ထားသည့်ပုံရိပ်နှင့်သိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်းမှမည်မျှကောင်းသည်ကိုကျေနပ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISF အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းများသည်အရောင်တိကျမှုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။ ကျနော်တို့က underpromise နှင့် overdeliver ဖို့ပိုနှစ်သက်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ Lumu မီတာသည်တိုင်းတာမှုအား ၃၀၀-၅၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (မည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့မဆို) ငါ့ကိုပေးသနည်း။
LUMU ၏အဆိုအရ ထုတ်လုပ်သူထောက်ခံမှုစာမျက်နှာများLumu ကိရိယာရှိ CCT တိုင်းတာမှုများကို 300K အထိလျှော့ချနိုင်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသော CCT တိုင်းတာမှုများကို 3000K အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းများသည် 6500K ရှိအစွန်းနှစ်ဖက်ကြားအလယ်တွင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ binning သတ်မှတ်ချက်များမှာ အလွန် Lumu စက်၏ခံနိုင်ရည်ထက်ပိုမိုတင်းကျပ်သည်။
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်သင်သည်သင်၏ Lumu အပေါ်တိကျသောရလဒ်များကိုလက်ခံရရှိလျှင်သင်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းများကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး Imaging Science Foundation ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အမှီအခိုကင်းစွာစစ်ဆေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်းများကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီ၎င်းတို့သည်မီတာပုံစံတစ်မျိုးနှင့်တိုင်းတာ။ ဓာတ်ခွဲခန်းပတ် ၀ န်းကျင်ပြင်ပရှိတိုင်းတာမှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့်အချက်များရှိသည်။
အချို့က“ ဘာကြောင့်သူတို့တိကျတိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မီတာကိုလုပ်ကြတာလဲ” ဟုမေးကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြေမှာအချို့သောနယ်ပယ်များတွင်တိကျမှုသည်နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်လှိုင်းအလျားတိုင်းတာမှုသည်ကွဲပြားသောအရောင်အပူချိန်နှင့်ရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုအမျိုးမျိုးသို့ကျရောက်ခြင်း၊ အချို့သောထုတ်ကုန်များက ပို၍ တိကျစွာတိုင်းတာနိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံတွင် 2300K နှင့် 2400K အကြားခြားနားချက်သည်လူ့မျက်စိအတွက် 6500K နှင့် 7000K အကြားကွာခြားချက်နှင့် tungsten-based သို့မဟုတ်ဆင်တူသောအလင်းရောင်ရုပ်ရှင်များတွင်အသုံးပြုခြင်းသည် 3200-5000K အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Lumu ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖြစ်သည်။ Lumu ကဲ့သို့သောကိရိယာများမှရလဒ်သည်အလွန်တိကျသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုသောမီတာများသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ခန့်ရှိသော iPhone dongle ထက် CCT အကွာအဝေးတွင် ပို၍ တိကျသောတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အလင်းတစ်ခုသည်သင့်အားဤထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုအတွက် 200K နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သောရလဒ်တစ်ခုကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိရိယာသည်၎င်း၏တိုင်းတာခြင်း resolution နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ထက်ကျော်လွန်သောအလင်းများ၏ရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်ကိုမှီခိုနေရသည်။
သင့်ရဲ့ဘက်လိုက်မှုအလင်းအိမ်ဘယ်လောက် lumens ထုတ်လွှတ်ပေးသလဲ? သူတို့သည် HDR ပြသမှုများအတွက်လုံလောက်စွာတောက်ပပါသလား။
5v 1a အလင်းသည်သီအိုရီအရအမြင့်ဆုံး 400 lumens ထက်မကျော်လွန်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဖြစ်သင့်သည်ထက်ပိုမိုတောက်ပသည်။ ရည်ညွှန်းမှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိရန်သင့်အလင်းများကိုသိသိသာသာလျော့ချရန်လိုအပ်သည်။ ပိုမိုကြီးမားသော 5v strips များသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနေရာတွင်အလင်းကိုဖြန့်ဖြူးပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၆ လက်မအရွယ်စင်းက ၄ လက်မထက်ပိုတောက်ပသည်။
သင်ပိုမိုတောက်ပသောအလင်းလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ 800 lumen MediaLight မီးသီးသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ 12v နှင့် 24v light strips များသည်ပိုမိုတောက်ပမှုကိုပေးသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ 12v strips များသည်အပိုအရောင်တောက်ခြင်းမလိုအပ်သောကြောင့်လူအများစုတို့သည် TV မှစွမ်းအားကိုပိုနှစ်သက်ကြသောကြောင့် USB-light များနီးပါးရောင်းချခြင်းမရှိပေ။
ကျွန်တော်တို့၏ MediaLight တစ်ခုတည်းချောင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ် ဦး သီအိုရီအများဆုံး outputs 400 lumens (၄၂ LED သည်အကြမ်းအားဖြင့် ၂၀lmm တစ်ခုစီ) ။ ဤသည်လူကြိုက်များချောင်းဘက်လိုက်မှုအလင်းထုတ်ပေးမယ်လို့သောအရာကိုနှင့်တန်းတူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 42 (20x5050mm) LEDs ကိုသာအသုံးပြုသည်၊ သေးငယ်။ အားနည်းသော5(5x3528mm) မျိုးမဟုတ်ပါ။ ဤရွေ့ကားကုန်စည် LED strips တွေမရှိကြပေ။ ၄ င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်းမြစ်သော LED's ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ သို့သော် USB ပါဝါပိတ်ချိန်တွင်တောက်ပမှုကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာအလင်းရောင်အများစုကိုမှေးမှိန်သွားသောကြောင့်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုတွင်ဤကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရဖွယ်မရှိချေ။
ကျွန်တော်တို့၏ MediaLight Quad ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရလဒ်များ 400 lumens အများဆုံးတောက်ပမှာ။ သို့သော် USB ပါဝါပိတ်ချိန်တွင်တောက်ပမှုကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာအလင်းရောင်အများစုကိုမှေးမှိန်သွားသောကြောင့်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုတွင်ဤကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရဖွယ်မရှိချေ။
HDR နှင့် ပတ်သက်၍၊ HDR ဗွီဒီယိုသည်အမှန်တကယ်နှင့် ပို၍ တူအောင်လုပ်ရန်တောက်ပသောဒေသများကိုအသုံးပြုသည်။ MediaLight သည် HDR ဖော်ပြဘက်လိုက်မှုအလင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များထက်ကျော်လွန်သည်။
MediaLight ကကျွန်ုပ်၏ monster 85 "TV အတွက်လုံလောက်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ သေချာပါတယ် ၎င်းကိုသင်ပါဝင်သောအဝေးထိန်း dimmer နှင့်အတူမှိန်သွားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ TV သည်နံရံပေါ်၌ရှိပါက 5m သို့မဟုတ် 6m Mk2 Flex ကိုသင်လိုချင်လိမ့်မည်။
အလေး ထား၍ တီဗွီနောက်တွင်ကြားနေနောက်ခံ (နံရံချိတ် (သို့) အ ၀ တ်) ချထားခြင်းကဲ့သို့အခြားဖြေရှင်းနည်းများရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အရောင်ခြယ်တဲ့အရောင်ကအပြန်အလှန်အားထက်အလင်းရဲ့အရောင်အပေါ်သက်ရောက်မှုနည်းပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်၊ MediaLight အစရှိသည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာအလင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဖြစ်သော MediaLight မော်ဒယ်များအတွက် ၆၅၀၀K နှင့်≥ 6500 CRI နှင့် MediaLight Pro လိုင်းအတွက် 98 Ra ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ယူဆချက်များမှာ LED bias light ထုတ်လုပ်သူများက 99K ခန့်မှန်းရုံသာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများသည်တိုင်းတာမှုနှင့်ထူးခြားစွာမကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုအဆင့်မြင့်ကိရိယာများဖြင့်စစ်ဆေးပြီးအလင်းဖြာများတပ်ဆင်စဉ်၎င်းတို့ကိုရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်မိစေရန်သေချာစေသည်။ ဤရွေ့ကားဘက်လိုက်အလင်းအိမ်အဖြစ် repackaged ငါးမွေးကန်အလင်း strips တွေမရှိကြပေ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဖြူရောင်အဖြူရောင်ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဖြူရောင်အစင်းများသည်အနက်ရောင် PCB strips များထက်အရောင်အပူချိန်ကိုပိုမိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (အချိန်ကြာရှည်စွာထိုင်ရသောအီလက်ထရွန်းနစ်အဖြူရောင်အချောသပ်ကိုကြည့်ပါ။ )
ကျွမ်းကျင်သူများကမူဘက်လိုက်မှုရှိသောအလင်းဖြစ်သည်ဟုသဘောတူကြသည် သင့် ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်သည့်နေ့၌နေရောင်၏အရောင် (သို့) CIE D65 စံ illumuminant ဟုခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအလင်းထုတ်လွှတ်သော diodes များကိုတိုင်းတာရန်ချိန်ညှိထားသောဓာတ်ပုံသုတေသန SpectraScan PR-650 နှင့် Sekonic C7000 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များသည်သူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြုရန်၎င်းတို့၏ PR-670 တွင်စမ်းသပ်သည်။
ပိုကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင် MediaLight နဲ့ကျွန်တော်တို့စျေးကွက်ကိုလာမှာမဟုတ်ဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကသံဖြူပေါ်မှာပြောတာတွေရှိပေမယ့်အခြားမည်သည့် LED အခြေခံအလင်းပစ္စည်းမဆို 6500K နဲ့မနီးစပ်သေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သော Antec အလင်းသည် ၉၅၀၀K ကျော်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်လက်တွေ့တွင်ကောင်းကင်ပြာရောင်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်လူကြိုက်များသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် 9500K ဖြစ်သည် ငါတို့ 20,000K ရှိတယ်၊ ငါတို့ဆိုလိုတယ် သူတို့ကိုဘေးချင်းယှဉ်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြည့်ပါ။ ပို၍ ကောင်းသည်မှာ၊ ၎င်းကိုကြားနေမီးခိုးရောင်ကဒ်ပြားပေါ်တွင်ထွန်းလင်းပြီးချိန်ညှိစစ်ဆေးသည့်ကိရိယာဖြင့်တိုင်းတာပါ။ မင်းသဘောကျမှာပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးများသည်အိမ်သုံးအတွက်တိကျရုံသာမကအိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံစနစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဗွီဒီယိုများကိုအရောင်အသွေးစုံသောပညာရှင်များအသုံးပြုကြသည်။ တကယ်တော့၊ သင်ဟာအကောင့်တခုရှိတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ဆိုရင် ဖလန်းဒါးစ်သိပ္ပံအနေဖြင့်၎င်းတို့ထံမှ The MediaLight ကိုဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
သင်၏ LEDs များ၏အရောင်ထုတ်ပေးသည့်အညွှန်းကိန်း (CRI) ကဘာလဲ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ LED အားလုံးတွင် CRI အနည်းဆုံး ၉၈ Ra ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူကြိုက်များသော MediaLight Pro တွင် CRI ၉၉ ရာဂဏန်းရှိသည်။
သင့်ရဲ့ဘက်လိုက်မှု Lights D65 လိုက်နာမှုရှိပါသလား
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာအလင်းများသည်အလွန်တိကျမှန်ကန်ပြီး၊ CRI တွင်မြင့်မားသောအရောင်အပူချိန် ၆၅၀၀K နှင့်အတူတောက်ပသောဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်များထက် ပို၍ တိကျသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အပါအ ၀ င်ဈေးကွက်ပေါ်ရှိမည်သည့်ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်မဆို D65 ကိုစျေးကွက်တင်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မယုံကြည်ပါ။ CIE D65 စံ illumuminant ကိုအနည်းငယ်မှေးမှိန်သောကောင်းကင်တွင်နေရောင်ခြည်မှဆင်းသက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်မည်သည့်အတုဘက်လိုက်မှုအလင်းသည် "simulated D65" ဖြစ်ပြီးသဘာဝနေရောင်ခြည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်ကိုဖြန့်ဝေသည်။
ဟုတ်တယ်၊ LED မီးသည် CIE D65 standard illumuminant ကိုတုပနိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိ MediaLight သည်အလွန်တိကျသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်တစ် ဦး spectrophotometer အောက်မှာတစ် ဦး ချောင်းသို့မဟုတ် LED အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ပါလိမ့်မယ်။ စနစ်တကျစီစစ်ထားသော (ပိုလျှံသောအနီအောက်ရောင်ခြည်) ဖြန့်ကျက်သောအဖြိုက်နက် halogen မီးသီး D65 ၏ရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ပုံစံအချက်၊ အပူထွက်ရှိမှု၊ စွမ်းအင်စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်သက်တမ်းတိုတောင်းခြင်းတို့သည်အဖြိုက်နက်မီးသီးများအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။
MediaLight ကို dimmer မသုံးပဲဝယ်လို့ရပါသလား။
မင်း dimmer မပါဘဲ MediaLight ကိုမင်းကမ်းလှမ်းသလား။
SMPTE အကြံပြုလေ့ကျင့်ခန်းစာရွက်စာတမ်းကတီဗွီနောက်ကွယ်မှမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည့်ဘက်လိုက်အလင်း၏တောက်ပမှုသည်ကြည့်ရှုသည့်စက်ပေါ်ရှိအဖြူရောင်အမြင့်ဆုံး ၁၀% ထက်နည်းသင့်သည်ဟုဆိုသည်။ dimmer မရှိဘဲ LED strips များသည်တောက်ပစွာလင်းလက်နေသည်။ ဤသည်ကအရောင်ဖျော့သောလူမည်းများ၊ အစွန်းရောက် Halo အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီးဘက်လိုက်မီးလုံးများအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုပထမနေရာတွင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
fluorescent ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာအလင်းရောင်စနစ်များကဲ့သို့သောအခြားစနစ်များသည်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်စံပြအလင်းရောင်ရရှိရန်အတွက် baffles နှင့် / သို့မဟုတ် neutral density filter များနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။
အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့သည်။ :-) မင်းမြင်နေတာက dimmer module ရဲ့ဝါယာကြိုးပဲ။ အဝေးထိန်းသည် ၁၅ ပေအကွာမှအလုပ်လုပ်သောကြောင့်အရှည်သည်အရေးမပါ။ မီးနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အပို 15 ပေကြိုးဝါယာကြိုးရှိပါတယ်။ သင် dimmer module တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်သင်ကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံထိစရာမလိုတော့ပါ။
မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို Amazon မှာရောင်းသလား။
ငါတို့မူရင်း MediaLight ထုတ်ကုန်တွေကို Amazon မှာရောင်းလေ့ရှိတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် COVID-19 ကပ်ရောဂါမတိုင်မီအထိဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်မရှိမဖြစ်ဟုမယူသောမည်သည့်အမိန့်ကိုမဆိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၀ ရက်နောက်ကျခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လူတိုင်းအိမ်တွင်ရှိနေပြီးတီဗီအသစ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အမေဇုံမှာကြားမှုများမှာအဆုံးတွင်မရှိခဲ့ပါ။ ငါတို့ဟာအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပုံဥတွေအားလုံးကိုတောင်းတတောင်းထဲထည့်လိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို Amazon မှဖယ်ထုတ်။ တိုက်ရိုက်ရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရုံးပိတ်ပြီးကားဂိုဒေါင်ထဲမှ USPS, UPS နှင့် DHL တို့မှအဆက်အသွယ်မရသောပစ်ကပ်များကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လမှာ Mk2 စီးရီးအသစ်ကိုငါတို့ထုတ်တဲ့အခါငါတို့ site ကိုရောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရောင်းဝယ်သူများမှတစ်ဆင့်ပါပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်ဖိစီးမှုနည်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိကျွမ်းလာသည် အများကြီး ပိုကောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ က်ဘ်စကားပြော၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအမြောက်အများရှိသည် (ကျွန်ုပ်တို့လက်ဖြင့်သင်လိုအပ်လျှင်တပ်ဆင်ခြင်းမတိုင်မီသင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုမည်) ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ပစ္စည်းများသုံးစွဲသူများသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သို့သုံးစွဲနေသည်ကိုသင်ပေးသည်။ ကျနော်တို့လည်းပိုကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး။
BiasLighting.com သည်ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည် သာယာလှပ Labs ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် Spears & Munsil Benchmark ကိုထုတ်ဝေသူများဖြစ်သည်။ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ၊ ငါတို့တည်ထောင်သူများသည် Digital Video Essentials ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျက်တူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဗီဒီယိုစံကိုက်ညှိခြင်းလုပ်ငန်း၌နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ပြောသမျှအိမ်တိုင်းပြဇာတ်ရုံရည်ညွှန်းစံကိုကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ပြီးရှူရှိုက်နေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကျေးဇူးတင်စရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြီးစွာသောပုံရိပ်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ဒိုမိန်းကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာတကယ်အေးမြဓာတ်ခွဲခန်း tools များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
ဘက်လိုက်မှုအလင်းအာကာသသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအိပ်မောကျနေသောကိစ္စဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောယခုပြတ်တောက်သော Ideal Lume (fluorescent) မီးကဲ့သို့အနည်းငယ်သောတောက်ပသောအစက်အပြောက်များအပြင်စျေးကွက်ရှိထုတ်ကုန်အများစုသည်စျေးအလွန်အကျွံ၊ စျေးပေါသောအမှိုက်သရိုက်သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအမှိုက်သရိုက်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် fluorescent systems ၏တိကျမှုကိုကြိုက်သော်လည်း LED ၏အဆင်ပြေမှုနှင့်တိကျမှုကိုပေါင်းစပ်ချင်ခဲ့သည်။
အဖြူရောင် LED များအားလုံးကိုနောက်ခံအပြာရောင်ဒိုင်အောက်ဖြင့်မောင်းနှင်သည် (ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ဤနေရာတွင် ၂၀၂၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ MediaLight Pro သည်အပြာရောင်ဆူးမရှိသောအနီးကပ်ခရမ်းရောင် diode ဖြင့်မောင်းနှင်သည်) diode သည်ဖော့စဖိုလ်ရောစပ်မှုဖြင့်ဖိုတွန်များကိုညွှန်ကြားသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောဖော့စဖောရောစပ်မှုသည်မှန်ကန်သောအခါလူ့မျက်စိသည်လူတို့၏အရောင်ကိုမြင်သည့်အပေါ် မူတည်၍ သင်လိုအပ်သည့်အရောင်အပူချိန်ကိုရရှိသည်။
၎င်းကို spectroradiometer အောက်တွင်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်အလင်း၏ရောင်စဉ်တန်းအရည်အသွေးများကိုပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။ အဖြူရောင် LED မီးရောင်၏ tell-tale နိမိတ်မှာအထက်ပြာပြာ (အလင်းအားလုံးတွင်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများ - tungsten, fluorescent, နေရောင်၊ neon စသည်) ရှိသည်။ ဤသည်ကအပြာရောင်အလင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်ပုံရသည်နေစဉ်, ဒီကတကယ်တော့ငါတို့ထဲကတစ်ခု၏ spectrograph ဖြစ်ပါတယ် အလွန် တိကျသော LEDs များ။ အခြားအရောင်များသည်မှန်ကန်သောချိန်ခွင်လျှာမျှသာရှိပြီး 6500K အရောင်အပူချိန်နှင့် CRI ≥ 98 Ra ရရှိနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တိုင်းတာမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာယူပြီး၊ တိကျမှန်ကန်ပြီးတသမတ်တည်းဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်တဲ့ကြားနေမီးခိုးရောင်ကဒ်ပြားကိုထုတ်ယူခဲ့တယ်။
MediaLight Mk2 စီးရီးများ၏ရောင်စဉ်တန်းစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောအရာများသည်အလွန်ခက်ခဲပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်နည်းစနစ်ကျသောကြောင့်၎င်းသည်တိကျသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ အလားအလာရှိသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကကျွန်ုပ်တို့အား subpar အစိတ်အပိုင်းများကိုပေးပို့သောအခါသူတို့သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ပြီးနောက် တိုက်ရိုက် ရာနဲ့ချီတဲ့ LEDs တွေ၊ ငါတို့လိုအပ်တာတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပေးသွင်းသူတွေကိုတွေ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူသောပရီမီယံ LEDs များသည်သူတို့တပ်ဆင်ပြီးတပ်ဆင်ပြီးနောက်၌ပင် ၄ င်းတို့၏အရောင်အပူချိန်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာစေခဲ့သည်။